Yusuf Indhacadde iyo Mustaqbalkiisa Siyaasadeed • Horseed Media
You are here: Home / Featured / Editorial / Yusuf Indhacadde iyo Mustaqbalkiisa Siyaasadeed
Yusuf Indhacadde iyo Mustaqbalkiisa Siyaasadeed
Posted: Hanad Askar - May 22, 2010
Daruuro madow ayaa hareeyay Yusuf Maxamed Siyaad (Indhacadde) ku sii jirkiisa siyaasadda Soomaaliya. Indhacadde oo u muuqda nin ka hor dega siyaasadda ayaa markii Madaxweynhaa Dawladda Federaalku si sharciga aan waafaqsanayn Xukuumaddii u kala direy waxaa afka furtey Yusuf Indhacadde waxaana oo ku tilmaamey xukuumaddii uu ka tirsanaa mid gashey khiyaano qaran, wuxuu sheegay in Raâ€™isulwasaare Sharmaâ€™arke xiriir la leeyahay Xoogaga Mucaaradka ee kasoo horjeeda dawladda isla markaana doonaayay inuu dawladda u gacan geliyo mucaaradka ayna la wareegaan awooda.
Indhacadde ayaa xusay in hub aad u fara badan uu ku wareejiyey Xoogaga Mucaaradka Cumar C/rashiid, sidoo kale wuxuu tusaale ahaan u soo qaatay dagaal dhawaan ka dhacay degmada Hodan ee gobolka Banaadir oo dhexmaray Ciidanka Dawladda iyo Xoogaga Mucaaradka taas oo u sheegay in Ciidanka ay waayeen wax hub ah ay ku dagaalamaan kadib markii Cumar C/rashiid Ciidanka AMISOM amar ku siiyey in aysan siin karin Indhacadde hub iyo sanaad.
Waxaa is weydiin mudan sababta uu markii hore uga hadliwaayey Indhacdde ee uu uga hadley markii madaxweynhu ku dhawaaqey in uu xukuumaddii kala direy?, waxaa arintaas doqonimo ku tilmaamey ninka ay jaalka ahaan jireen Indhacadde waa Shiikh Xassan Daahir Aways.
Kadib markii madaxweynaha Dawladda Federaalku uu ka laabtey go’aankii uu ku sheegay in uu xukuumadda kala direy, waxa ay arintaasi ku noqotey naxdin iyo filanwaa rag uu ka mid yahay Indhacadde.
Wasiiru Dawlaha Gaashaandhiga Indhacadde ayaaÂ ahaa ninkii asaasey Xisbul Islaam, waxa uu dagaal la galay Dawladda uu ka tirsan yahay iyo tii ka horeysaba, waxa uu xiriir dhaw lalahaan jirey xarakada al-Shabaab, marka loo eego raysalwasaaraha ,Â Indhacadde ayaa aad uga dhaw kooxaha Mucaaradka kana badiya, isla markaana sheegayÂ in uu kuwa ajaanibta ah ee ka dagaalama gudaha SoomaaliyaÂ u guuriyey gabdho Soomaaliyeed.
Su’aalaha la siweydiinaayo ayaa ah Wasiirku haddii uu wuxuun ka garanaayo aqoonta dawladeed xilka uu hayo maanta ayuu iska casilayaa, sababtuna waa xukuumad uu ku tilmaamey mid khiyaamo qaran gashey isla markaana u adeegta mucaaradka wasiir uma noqon karo,Â haddii uu is casili waayo Raysalwasaaruhu waxa uu ku khasban yahay in uu shaqo joojin ku sameeyo tan iyo inta uu xukuumad cusub soo magacaabayo.
Mustaqbalka Siyaasadeed ee Indhacadde waa mid mugdi ku jira, ma ahan xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka oo halkaas dib ugu laaban kara, haddii uu dib ugu laaban lahaa aqoontii uu sida fiican u yaqaaney ee kooxaha mucaaradka iyaduna waa mid aan suurta gal ahayn, waxa ay markaan ku tilmaamaan Murtadd in uu yahay, Muradna waxay sheegaan Mindi ayaa iska leh, waxa u furan waa dhawr arimood:
In uu ka mid noqdo ciidamada uu hadda ku dhexjiro isla markaana ahaado taliye kooxeed
In uu dalka isaga baxo isla markaana magangelyo u raadsado dalal shisheeye.
In uu Sheegto in uu qaatey dariiqada Suufiyada oo Ahlu-Sunnah dhankooda ku biiro inkasta oo ay adagtahay sida ay u aaminayaan.
In uu heshiis la galo Shiikh Xassan Daahir oo ehelnimo iyo aqoon dheer ka dhexeyso isla markaana uu markale xabadda u soo rido dhanka dalwladda.
Si kastaba ha ahaatee Dawladda Federaalka ayaa ku shaqeysa wax loogu yeero dib u heshiisiin waxkastana waa mid suurta gal ah laakiin waxaa la rumeysan yahay in Yusuf Indhacadde aanu la saanqaadi karin Xukuumadda Federaalka, wasiir ma eedeeyo xukuumad uu ka tirsan yahay hal wasiir waxa uu sameeyo ayaa saameyn ku yeelata dhamaan xukuumadda, waxaana ay wada saaran yihiin waa hal miisaan.